Apple waxay ku soo bandhigi kartaa qaar ka mid ah AirPods leh ismaamul weyn | Waxaan ka socdaa mac
Waxaan horeyba u joognay usbuuca labaad ee Oktoobar mana ogin haddii Apple uu leeyahay soo bandhigid alaab kale oo la qorsheeyey, markan, oo la xiriirta Macs iyo suurtagal AirPods 2. Si kasta ha ahaato Waxa aan rabo inaan ku milicsado qodobkaan waa mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee ay keeni karaan AirPods 2 cusub.
Muuqaalka aan rabo inaan ka faaloodo waa ismaamulka cusub ee suurtogalka ah ee jiilka labaad ee AirPods ay lahaan lahaayeen. Muuqaalkani waa wax Apple ay ku qasbanaan lahayd inay tixgeliso Waana in suuqa ay ka buuxaan xulashooyinku, waa mid ka mid ah waxyaabaha ay isticmaaleyaashu ku eegi doonaan muraayad weyneysa.
Is-maamul-goboleedka hadda jira ee AirPods maahan inuu xun yahay, laakiin uma fiicna sida ugu macquulsan. Marka loo eego habka loo maareeyo tamarta, jiilka koowaad ee AirPods si fiican ayuu u sameeyaa waana taasi in kastoo daqiiqadihii ugu horreeyay batteriga kiiska uu daadiyey qalad ku yimid qalabka firmware-ka, haddana markii dambe kuwa Cupertino ayaa wax ka beddelay qaabka uu ku shaqeynayo iyo hadda waxaad ka qaadeysaa kiiska AirPods, waxay ku dhacaan mashiinka tuubada batroolka haddii ay dhacdo inaanan isticmaalin muddo dheer.
Xilliga hadda la joogo, waxaan haynaa Airpod-yada mar haddii laga saaray dacwadda, waxaan haysannaa illaa 5 saacadood oo madax-bannaanidooda iyo suurtagalnimada inaan kusii wadno dib-u-soo-buuxinta illaa maamul-madax-bannaan ilaa 24 saacadood, illaa inta aan uga tageyno kiiska waqtiga loo baahan yahay.
Taasi waa sababta dhammaanteen aan u leenahay jiilka koowaad ee AirPods waxay filayaan dhagaha dhagaha la cusbooneysiiyay iyadoo runtii la horumarin karo oo la aqbali karo iyo madax-bannaanideeda oo la hagaajiyay waana taas haddii dhagaha dhagaha la 'ay adeegsan doonaan mikro-garosor cusub oo leh tamar sare, waxaa la filayaa madax-bannaanidu hoos ayey u dhici kartaa. Maxay Apple ka qaban doontaa tan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » AirPods 2 ma yeelan doonaan ismaamul isku mid ah?
Miyuu cusub ee Apple Watch Series 4 dib u bilaabayaa kaligiis?